Fangatahana FIDULINK kaonty momba ny kaonty amin'ny orinasa 193
CENTRE BUSINESS INTERNATIONAL
OpenOpen 24 / 24 FIVORIANA 193
MIarahaba antsika mody
FAMORIANA ORINASA (Lisitry ny firenena)
KAOM-BOLA (lisitry ny firenena)
Kaonty (lisitry ny firenena)
Biraon'ny VIRTUAL (Lisitry ny firenena)
Fanampiana ara-dalàna (Lisitry ny firenena)
JEREO NY SERVICES REHETRA
INONA NY FIDULINKANA?
LESENSES & AUTHORIZATIONS
ACCOUNTING & MANANA
Ny kaontiko dia ny serivisiko
FIDULINK SENIOR ACCOUNTANT
Mpanome FIDULINK fanohanana orinasa sy orinasa mpandraharaha mihoatra ny 10 maneran-tany amin'ny ezaka sy ny fanaraha-maso ny orinasan'izy ireo ao amin'ny 193 Pays. Ny tompon'andraikitra amin'ny FIDULINK dia manana traikefa mihoatra ny taona 10 amin'ny orinasa kaonty na amin'ny famakafakana ara-bola sy ny kaonty ho an'ny fampiononana ny mpanjifanay.
ACCOUNTANTO ANY 1 CLIC
Fanontaniana? Olana iray? Mila torohevitra? Mila valiny haingana? Mila fanampiana amin'ny kaonty maika! Fidulink Accountants dia eo am-pelatananao amin'ireo fanontaniana rehetra, olana ary torohevitra momba ny kaonty hafa.
Ny kaonty amin'ny findainao!
Eny miaraka amin'ny FIDULINK mety ankehitriny izao ny vahaolana FIDULINK dia manolotra ireo mpampiasa azy ny mety hidinika amin'ny kaonty mandritra ny minitra vitsivitsy satria smartphone na solosaina amin'ny alàlan'ny fihaonambe video, telefaona ... Eny dia hita any amin'ny firenena 193 izao.
NY FAMPANDANIANA NY FIKOMPOANA AN-TANANA ao amin'ny 193 RAJOELINA
FANAVOTANA NY FANAVOTANA
Ny kaontinao amin'ny fomba tsara indrindra ao amin'ny firenena 193